Khilaafka Dowladda FS iyo Maamulada Goboladda oo Machadka Heritage uu warbixin ka soo . – Madal Furan
Hoy > Warka > Khilaafka Dowladda FS iyo Maamulada Goboladda oo Machadka Heritage uu warbixin ka soo .
Khilaafka Dowladda FS iyo Maamulada Goboladda oo Machadka Heritage uu warbixin ka soo .
Muqdisho (Madal Furan) Qoraal ka soo baxay Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ayaa lagu soo gudbiyey warbixin saaray ka hadlaysa khilaafka dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada, kaasoo bilihii la soo dhaafay gaaray halkii ugu sareeysay.
Halkan hoose ka akhriso Warbixinta.
Click to access Qoraal-Kooban-17-HIPS.10.06.2018.pdf
Dowlada Jabuuti oo Maxkamadda Caalamiga ee ICJ u gudbineysa dacwad ka dhan ah dalka Eritrea.
Deni, Waare, Lafta-gareen, Xaaf iyo Axmed Madoobe oo shir kaga qayb geleya Nairobi.